Somalia online: Danjiraha Soomaaliya Ee Kenya Oo Qaliin Labaad Lagu Sameeyay
Danjiraha Soomaaliya Ee Kenya Oo Qaliin Labaad Lagu Sameeyay
Nairobi (RBC) Sida ay u sheegeen saaka RBC Radio qaa ka mid ah howlwadeenada safaarada Soomaalida ee dalka Kenya, waxa xaley qaliin labaad lagu sameeyay oo jimcihi ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay wadamada madaxtooyada Kenya ee ku taala caasimada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Danjiraha ayaa qaliin looga labaad looga sameeyay lugtiisa midig gaar ahaan anqowka ooo tirir ka galay, waxana ay sheegeen dhaqaatiirta ku howlaan dhaawiciisa in lagu guuleestay qaliinka.
Danjiraha oo ku jira isbitaalka Nairobi ayaa waxa shaley ku booqday ra’iisal wasaarayaashii horre Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmaake kuwaas oo u rajeeyay in uu caafimaad buuxo siiyo in dhaqso ukakaco dhaawaca yer ee soo gaaray.
Sidoo kale safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali Nuur Ameerico waxa ku booqday isbitaalka shaley qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaaalada Nairobi oo ay ku jiraan wairiyaal, sidoo kale danjirayaasha wadamada caalamka u fadhiya Kenya ayaa sidoo kale ku booqday isbitaalka danjiraha waxana ay u rajeeyeen in uu alle caafimaad buuxa siiya.
Danjire Ameerico ayaa hadda xaaladiisa caafimaad waxa ay tahay mid aad u wanaagsan, waxana uu ka yera roonyahay markii horre sida uu u sheegay saxaafada Cabdi Sataar Sabriye oo ka mid ah shaqaalah Safaaradda Soomaalida ee dalka Kenya.
Maxamed Cali Nuur Ameerico Dajiraha Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa ku dhaawacmay jimcihii shil gaari ka dib markii gaarigii uu la socday uu ku dhacay gaari kale oo ka soo leexday geed ku dhacay wadada marta xarunta madaxtooyada Kenye ee Harambii.